आजको राशिफल : भाद्र २८ गते शनिबार, भगवानले रक्षा गरून्
वि.सं. २०७६ भाद्र २८ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर १४ तारिख
पठनपाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने छ । इष्टमित्रले प्रदान गरेको सल्लाहलाई पालना गर्दा फाइदा हुने योग छ । देवालय मठ मन्दिर आदिको भ्रमण र दर्शन हुनेछ । विश्वासको वातावरण बन्नेछ । निर्णयात्मक शक्ति बढ्नेछ । घरायसी वातावरणमा सुधार आउने छ, रमाइलो पारिवारिक जमघट हुनसक्छ । सामाजिक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रममा संलग्न हुनुपर्नेछ । विशेष ज्ञानको उदय हुनेछ, कर्मप्रति लगनशील भइने छ । दैनिक कामकाजको चाप बढ्न सक्छ । शत्रुहरू पराजित हुनेछन् । पठनपाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने छ । साँझमा बाह्रौं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ, त्यसपछि खर्चको मात्रा बढ्न सक्छ
भाग्यमा चन्द्रमा छ, पारमार्थिक काममा खटिनु पर्ने योग छ । परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने छ । कल्याणको काम र जनहीतका लागि समय र धनको उपयोग गरिने छ । बौद्धिक र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि गरिएको प्रयास सफल हुनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो देखिन्छ । स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । बन्दव्यापार र कामधन्धाका क्षेत्रमा खट्ने समय आएको छ । लामो दूरीको यात्राका लागि अनुकूल समय छ । दिनभरि लाभमूलक परिणाम प्राप्त हुनेछ । बेलुका कर्मक्षेत्रमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ । त्यसपछि थातीरहेको आवश्यक र गर्नैपर्ने काममा मिहिनेत गर्ने विचार आउने छ । दाम्पत्यसुख, प्रेमसम्बन्ध तथा पारिवारिक स्थितिमा शुभफल देखिन्छ ।
आज बेलुकासम्म दाम्पत्य जीवनमा सकारात्मक सम्बन्ध रहने देखिन्छ । आज आत्मीय मित्रसँग रमाइलो पल बिताउने समय हो । उता व्यवसायिक गतिविधि र बन्दव्यापारबाट पनि लाभ लिन सकिने समय छ । हाँसखेल र रामरमाइलोमा नै आजको दिन व्यतीत हुने सङ्केत छ, मन कल्पना र भावनामा रुमल्लिन सक्छ । अपराह्नमा आठौं भावमा चन्द्रमाको प्रवेश हुँदैछ । अब रामरमाइलो त्यागेर बाध्यात्मक काम र व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्ने हुन्छ, कुनै महत्वपूर्ण घरायसी काम छ भने साँझ पर्नुअघि नै सिध्याउनु राम्रो हुन्छ । त्यसपछि पारिवारिक जीवनमा असमझदारी वा चिसोपन बढ्न सक्छ ।
दिनभरि किचलो, झमेला, पुराना काम र खित्रिङमित्रिङमा समय बित्नेछ । मनमा दम्भ हाबी हुने समय छ, त्यसैले वादविवा*द र मु*द्दामामिला अघि सर्नु हुँदैन । बन्दव्यापार र उद्योगधन्दामा ध्यान केन्द्रित गरेमा मात्र लाभ लिनसकिने छ । घरिघरि मन अशान्त रहने छ, के गरौं र के गरौं भइरहन्छ । भावुकता र काल्पनिकतामा अल्मलिएर गर्नै पर्ने काममा विलम्ब हुनसक्छ । हुन त दैनिक कामधन्दा र बन्दव्यापार सामान्य नै रहने देखिन्छ । गरेका काम दोहोर्याउने परिस्थिति बन्नेछ । बेलुकीपख मन आनन्दप्राप्तिका लागि आकर्षित बन्नेछ र विलासिताका भावनाहरू जागृत हुनेछन् । रमणीयतातर्फ झुकाव बढ्ने छ ।
भाइबहिनी वा सन्ततिका तर्फबाट खुशीको खबर प्राप्त हुने छ । घरपरिवारबाट सहयोग मिल्नेछ । माया प्रेमको लागि रमाइलो समय छ । विपरीतलि*ङ्गीबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ, किशोरकिशोरीमा रागात्मक भावनाको उदय हुनसक्छ । सँगीसाथी र परिवारका सदस्यहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ । बुद्धिकौशल र आत्मबल बढ्ने बेला छ । ठूलाबडाले सहयोग गर्नेछन् । व्यापार/व्यवसाय मध्यम रहेको छ । ज्ञान र चिन्तन उपयोगी बन्नसक्छ । बौद्धिक र चिन्तनमूलक क्रियाकलाप दिन बित्नेछ । तर साँझदेखि प्रतिकूल समय सुरु हुनसक्छ । मन अशान्त रहने छ, बुद्धिमा अहङ्कारको प्रवेश हुनेछ, रिसको कारणले असर पुर्याउने सम्भावना समेत छ ।
चतुर्थ भावको चन्द्रमाले तपाईंलाई शुभफल प्रदान गर्ने परिस्थिति बनेको छ । हुन त प्रारम्भमा जाँगर चल्ने दिन देखिंदैन, मनमा नैराश्य र वैराग्यका भाव सञ्चरण भए पनि गरेको प्रयासबाट सार्थक फल प्राप्त हुनेछ । दिनको सुरुवातमा आलस्य र थकानको महसुस भए पनि आनन्द र उल्लासको वातावरणमा समय व्यतीत हुनेछ । आम्दानीको नयाँ स्रोत देखा पर्नेछ । डुबेको धन अप्रत्याशित ढङ्गले फिर्ता आउन सक्छ । परदेशमा बसी रोजगारी र व्यवसाय गर्नेहरूले खानपीन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा खर्च गर्नेछन् । प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्यसुखमा बृद्धि हुनेछ । परिवारका सदस्यहरूमा खुसी, उमङ्ग र हर्षको सञ्चार हुनेछ ।
आज बेलुका तपाईंको राशिमा रहेको चन्द्रमाले धनस्थानमा प्रवेश गर्दैछ । अब धनधान्य बृद्धि गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । नरनाताको काम गरेर सम्मान र साख बढाउन सकिने छ, त्यस्तै पारिवारिक जमघटमा सहभागी बन्नुपर्ने छ । कतैबाट वस्त्र, अलङ्कार आदि उपहारसमेत पाउन सक्नुहुन्छ । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द समेत पाइएला । आर्थिक पक्ष मजबूत बनाउन गरेको चिन्तन फलदायी हुनेछ । कृषि तथा कृषिजन्य व्यवसायमा संलग्नहरूका लागि यथेष्ट लाभ लिन सकिने समय छ । सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ । दिन रमाइलो गरी बित्नेछ । महत्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्नेछ ।
आज साँझबाट तपाईंका नकारात्मक समयको समाप्ति हुँदैछ, तर सूर्योदयकालमा चन्द्रमा अनुकूल छैन, तर नडराइकन सुझबुझ, आत्मबल र हौसलाको प्रयोग गरेमा सफलता नै हासिल हुने दिन हो । वहस र वादविवादमा विजय प्राप्त हुनेछ । नयाँ कामको वातावरण तैयार हुनेछ । पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहने छ । भविष्यमा फाइदा हुने कुनै काम गर्ने वातावरण मिल्नसक्छ । अब क्रमशः असन्तुष्टि समाप्त हुनेछन् । अधुरा कामहरू पूर्ण हुन थाल्नेछन् । स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार हुनेछ । आध्यात्मिक र सामाजिक काममा सक्रिय बन्नु पर्नेछ । वादवि*वादमा विजय प्राप्त हुनेछ । परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने छ । बन्दव्यापारमा देखिएका समस्या हल हुनेछन् शुभदिन ।